मिगौला विरामीलाइ सहयोगको अपिल – Yug Aahwan Daily
मिगौला विरामीलाइ सहयोगको अपिल
युग संवाददाता । १३ असार २०७७, शनिबार ०९:४७ मा प्रकाशित
कालिकोट, १३ असार ।
सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिका वडा नं. ४ का विशाल दर्जीको मिर्गौला सम्बन्धि समस्या छ । अबको दुई महिनाभित्र अप्रेशन गरी मिर्गौला प्रत्यारोपण नगरे उनको ज्यान पनि जान सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दर्जीले आफ्नो उपचारमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले एक महिना अगाडी बम्बईको डिआईपाटिल अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराए । त्यहाँ डाक्टरले एउटा मात्र मिर्गौला रहेको र त्यसले पनि काम गर्न छाडेकाले तीन महिनाभित्र अप्रेशन गर्नुपर्ने बताए । तर उनीसँग न उपचार गर्ने पैसा छ, न त प्रत्यारोपणका लागि मिर्गौला नै । उनी बम्बईमा काम गर्न नसक्ने भएपछि समस्या भयो । उनकै गाँउका वडा सदस्य ध्वजबहादुर शाहीको पहलमा उनलाई उद्धारगरी लकडाउनका बेला घर ल्याइएको हो ।
हाल उनी मिर्गौलाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन सदरमुकाम आएका छन् । उनले भने, ‘म बाँच्न चाहान्छु, मेरो उमेर २० बर्ष मात्र भयो । श्रीमती र परिवारका लागि पनि मैले बाँच्नुपर्छ, अबको दुई महिनाभित्र अप्रेशन नभए म बाँच्दिन ।’ विशालका बुवा धनपती दर्जीले छोराको ज्यान बचाईदिन सबैलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘मेरो सहारा भनेकै यही छोरा हो, कालापाहाड गएर भए पनि परिवारको छान टार्दै आएको थियो । यही छोरालाई ठुलै रोग लाग्यो, यसको ज्यानमा केही भयो भने हामी कसरी बाँच्ने ? बरु मिलेमा मिर्गौला दिन्छु, तर प्रत्यारोपण गर्न चाहिने रकम कहाँबाट ल्याउने ?’